लफडा नै लफडाको बैंक, एनआईसी एशिया !
काठमाडौं । पछिल्लो समय एनआईसी एशिया बैंक लफडा नै लफडाको बैंकको नामले चिनिएको छ । बैंकको दिनहुँ जस्तो एउटा न एउटा बदमासी बाहिर आउन थालेको छ ।
समस्या नबढाऔं, समाधान खोजौं : कुन्ती पोखरेल
सहकारी पिडित हकहित सँंरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्ती पोखरेलले जग्गामा निर्मित हुने अपार्टमेण्टका बुकिङकर्ताहरुले बैंकको विरुद्धमा सडम संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएमा त्यसबाट हुन जाने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार स्वय.म बैंक हुनुपर्ने बताइन् ।
आचार्यका भनाई पनि जस्ताको तस्तैः–
आचार्यले नेपालीपत्रसँगको कुराकानीमा सुरुमै भने, ‘एनआईसी बैंकको गाडीको ऋण तिरिसकेर कागज फिर्ता माग्न र कालो सूचीबाट नाम हटाउन भनेर करिब दुई हप्ता अगाडि बैंक आएको उल्टो ११ लाख तिर्न बाँकी छ रे...!’ उनको शरीरमा टाँसेको पोष्टरमा पनि यही नै लेखिएको थियो ।
उनको शरीरमा फरक–फरक शब्द लेखिएको ४/५ वटा पोष्टर थियो । जसमा लेखिएको थियो– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यू, तपाईंको अर्थतन्त्रमा मलाई ठूलो अन्याय भयो । कि मलाई न्याय दिनुहोला । कि तुरुन्त राजिनामा दिनुहोस् । एनआईसी बैंक पीडित बासु आचार्य ९८५११...... ।’
फेसबुकमा आएको जानकारी एक तस्बिर हेरौं
विशेषत मुद्राको कारोबार वा लेनदेन गर्ने गरी प्रचिलत कानुन बमोजिम संगठित संस्थालाई बैंक भनिन्छ । प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश २०६१ मा चाहेको बेला झिक्न पाउने गरी राखिदिने ब्याजमा ऋण दिने आदि आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थालाइ बैंक भनिएको छ ।
बैंक यस्तो वित्तीय संस्था हो, जहाँ मानिसहरुले आफ्ना धनराशी जम्मा गर्ने गर्दछन् र आवश्यक पर्दा ऋणको रुपमा चल अचल पूँजी निकाल्न सक्दछन् । कसैलाई पैसाको खाँचो परेको खण्डमा बैंकबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी ऋण लिन पनि सक्दछन् ।
आफ्नो धनराशीको उचित सुरक्षा तथा बैंकवाट ब्याज लिने हेतुले बैंकमा धनराशी जम्मा गरिने गरिन्छ । जनताले आफूले बैंकमा जम्मा गरेको धनराशी पुर्व निर्धारित बैंकिङ नियम पुरा गरि निकाल्न र पुनह राख्न पनि सक्दछन् ।
बैंक सम्बन्धी विषय यहाँ किन राखियो ? भन्नेबारे तपाईंले माथि पढेपछि थाहा पाउनुभयो होला । यस्ता बैंकहरु आफ्नो कर्तुतहरु ढाकछोप रोक्न विज्ञापन दिएर फकाउने गर्छन् । स्रोतका अनुसार आफ्नो एनआईसी एशिया बैंकले कर्तुत ढाकछोप गर्न मिडिया हाउसहरुलाई विज्ञापन दिएर फकाउँदै आइरहेको छ ।